Warshadda Dharka Dharka Dahaarka leh ee Ptfe oo Rakhsan iyo alaab-qeybiyeyaasha | Chengyang
Mashiinka Dahaarka ah ee loo yaqaan 'Ptfe Coated Glass Glass' waa nooc ka mid ah wax-qabad sare, ujeeddo badan oo ujeeddooyin wax soo saar cusub ah. Waa maro maro ah oo ka samaysan polytetrafluoroethylene ganaax ah (oo badanaa loo yaqaan boqorka caaga ah) emulsion oo ay ku calool gashay maro fiber dhalo ah oo waxqabadka sare leh.
FOB Qiimaha: USD4-5 / sqm
Tirada Min.Order: 10sqm
Kartida Bixinta: 50,000 sqm bishiiba
Dekedda dekedda: Xingang, Shiinaha
Shuruudaha Bixinta: L / C marka la eego, T / T, PAYPAL, UNESTERN UN
Muddada Gaarsiinta: 3-10days ka dib bixinta hore ama la xaqiijiyay L / C helay
Faahfaahinta xirxirida: Waxaa lagu daboolay filim, oo lagu rakibay kartoono, lagu raray baaldiyo ama sida macaamilku u baahan yahay
Hore: Acrylic dahaarka Maro adag Fabric
Xiga: Maro adag
1. Waa maxay MOQ?
2. Waa maxay dhumucda dharka PTFE?
3. Miyaan ku daabacan karnaa astaanteena derin?
Dusha sare 'PTFE', oo sidoo kale loo yaqaan 'ptfe', oo aad u siman, aan awoodin inuu wax ku daabaco derin laftiisa
4. Waa maxay xirmada dharka PTFE?
Xirmada waa kartoon dhoofinta.
5. Miyaad heli kartaa cabbirka caadiga ah?
Haa, waxaan kuu soo bandhigi karnaa dharka ptfe ee aad rabto cabirkiisa.
6. Waa maxay qiimaha qaybta loogu talagalay 100roll, 500rollroll, oo ay ku jiraan xamuulka xawilaadda loo maro waddamada midoobay?
Waxaad ubaahantahay inaad ogaato sida cabirkaaga, dhumucdaada iyo shuruudahaagu markaa xisaabin karno xamuulka. Sidoo kale xamuulku wuu kala duwan yahay bil kasta, wuxuu kuu sheegi doonaa isla markiiba ka dib baaritaankaaga saxda ah.
7. Ma qaadan karnaa shaybaar? Immisa ayaa lagaa qaadi doonaa?
Haa, Muunado cabirkeedu yahay A4 waa bilaash. Kaliya xamuulka soo qaado ama ku bixiso xamuul akoonkeena paypal.
USA / West Euope / Australia USD30, South-East asia USD20. Aag kale, xigasho qeyb ahaan
8. Muddo intee le'eg ayey qaadan doontaa in la qaado tijaabada?
4-5days ayaa kaa dhigi doonta inaad hesho shay-baarka
9. Ma ku bixin karnaa shaybaarka paypal?
10. Muddo intee le'eg ayey ku qaadan doontaa soo saaraha mar amar la bixiyey?
Caadi ahaan waxay noqon doontaa 3-7days. Xilliga mashquulka ah, wax ka badan 100ROLL ama baahi gaar ah oo aad u baahan tahay, ayaan si gaar ah uga wada hadli doonnaa.
11. Waa maxay kartidaadu?
A. Soo-saar. Qiimaha tartanka
B. 20years Khibrad Soo-saar. Shiinaha warshadda dhegaha 2aad ee PTFE / wax soo saarka maaddada dahaarka leh. Khibrad aad u tiro badan oo ku saabsan xakamaynta tayada iyo tayada wanaagsan ee la garanteed.
C. Hal-soo-saarid, wax-soo-saar dufcad yar oo dhexdhexaad ah, adeeg nashqadeyn yar
D. Warshad BSCI la hubiyey, khibrad qandaraas ku leh supermarket weyn ee USA iyo EU.
E. Gaarsiinta, gaarsiinta lagu kalsoonaan karo
Maro adag dahaarka Teflon
Black Ptfe Maro adag Maro
Maro Cas cas
Fiberglass Maroyin Bixiyeyaasha
Carbon Maro adag
Maro Maro ah, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Maro adag Dahaarka Acrylic, Aluminized Maro adag, Maro adag Maro adag, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric,